प्रदेश १ मा नेपालकै पहिलो दलित महिला प्रदेश मन्त्री « Mechipost.com
प्रदेश १ मा नेपालकै पहिलो दलित महिला प्रदेश मन्त्री
प्रकाशित मिति: ५ माघ २०७६, आईतवार २२:०७
प्रदेश नं. १ ले नेपालकै पहिलो दलित महिला प्रदेश मन्त्री पाएको छ ।
आइतवार मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नियुक्त गरेकी झापाकी जसमाया गजमेर नेपालकै पहिलो दलित महिला प्रदेश मन्त्री हुनुभएको हो । दलित महिला समुदायबाट संघीय सरकारमा मन्त्री भएपनि सात प्रदेश मध्ये प्रदेश नं. १ ले पहिलो दलित महिला मन्त्री पाएको हो ।
पूर्व एमालेको कोटाबाट समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य बनेकी गजमेर झापाकी जुझारु नेता हुनुहुन्छ । पार्टीभित्र ‘क्रान्तिकारी’ छवि बनाउनुभएकी गजमेर निरन्तर जनताको सेवाको प्रतिफल स्वरुप आफू यो अवस्थामा आइपुगेकी वताउनुहुन्भछ । ‘मैले कहिल्यै मन्त्री हुनुपर्छ भनेर मरिहत्ते गरिनँ’, राज्यमन्त्री बनेपछि उहाँले भन्नुभयो ‘नेतृत्वले जिम्मेवारी दियो अनि स्वीकारे ।’
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यसअघि मन्त्रीहरु थप्दा महिला र दलितलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुभएको थियो । यसै अनुरुप राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी जसमाया गजमेरसम्म आइपुगेको हो । सामाजिक विकास राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारीपछि उहाँले महिला, दलित र उत्पीडित वर्गको हितमा काम गरेर देखाउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।
जसमाया ४० वर्ष अघि इलामको फाकफोक थुममा विपन्न दलित परिवारमा जन्मनुभएको थियो । त्यसबेला वालीघरे प्रथा व्यापक थियो । यस प्रथाले उहाँलाई भित्रैबाट पोल्थ्यो। विभेद किन हुन्छ भन्ने उहाँको बाल मानसिकताले बुझेको थिएन । त्यही विभेद र छुवाछुतको भोगाइले उहाँलाई राजनीतिसम्म डोहोर्याएएर मन्त्री बनायो । जसमाया स्कुले जीवनबाटै कम्युनिस्ट राजनीतिमा आबद्ध हुनुभएको थियो ।
घर गाउँमा मात्रै हैन, स्कुलमा पनि छुवाछुतको व्यवहार सहनु परेको अनुभव उहाँसँग ताजै छ । ‘छुवाछुतको भोगाइ नै मेरो राजनीतिको प्रेरणा हो’, उहाँले भन्नुभयो । स्कुल, गाउँ इकाई कमिटीदेखि जिल्ला र केन्द्रीय स्तरसम्म उनको राजनीतिक अनुभव छ । पार्टीमा रहेर उनले निरन्तर काम गरिरहुन भयो । ‘यही निरन्तरताले प्रदेश सदस्य हुँदै मन्त्री बनेकी हुँ’, उहाँले भन्नुभयो । (इकान्तिपुरबाट)